Diyaaradaha Kenya oo duqeyn ka geystay Gobolka Gedo.
Diyaaradaha dagaalka Xukumadda Kenya ayaa xalay saq-dhexe duqeyn ka fuliyay deegaanka Cows-Qurun oo 70 KM dhinaca koofureed kaga jiheysan Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo.
Duqeynta ayaa sababtay dhimasho iyo dhaawac gaartay dad rayid ah oo ku sugnaa xaafadahooda, kadib markii gantaalada diyaaradaha ay tuurayeen guryahooda ugu tageen sida ilo wareedyo u sheegeen Axadle.
Xogta laga helayo duqeynta ayaa intaas ku dareysa in dadka dhaawacmay loo qaaday mid kamid ah goobaha Caafimaadka si looga daweeyo waxyeelada gaartay, Inkasta oo aan la heyn tirada rasmiga ah dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay.
Axadle waxa ay la xiriirtay mas’uuliyiin katirsan Maamulka Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo si aynu wax ugu weydiino khasaaraha dadka rayidka gaaray iyo waxa ay kala socdaan, balse kama aysan jawaabin wicitaankeena.
Diyaaradaha dagaalka Kenya ayaa dhowr jeer duqeyn ay ka fuliyeen deegaanno dhaca Dowlad Goboleedka Jubbaland waxa ay waxyeelo gaarsiiyeen dad Shacab ah, inkasta oo Xukuumadda Nairobi ay dafirtay.
Sidoo kale Askarta Kenya waxa ay marar badan madaafiic ku tuureen deegaanno ay ku sugan yihiin dad rayid ah oo dhimasho dhaawac gaartay, sida horay loo diiwaangeliyay dhacdooyinkaas.
Dowlad Goboleedka Jubbaland, mas’uuliyiinta Xukumadda Gobolka Gedo iyo Saraakiisha Kenya wali kama aysan hadlin duqeynta diyaaradaha Militariga Xukuumadda Nairobi ay ka geysteen deegaanka Cows-Qurun ee Gobolka Gedo.